TILAABOOYINKA TALLAABO-TALLAABO-TALLAABO AH EE KORITAANKA GEEDO YAANYO - BEER CAGAARAN
Qarsoodiga ah ee sii kordhaya iyo daryeelidda geedo yaanyo
Tamaandho waa mid ka mid ah cagaarka ugu caansan. Iyaga oo aan, laga yaabe, ma samayn karaan on beerta kasta. Khudaarta cagaaran waa mid aad u fiican, waa mid goos goos ah xilliga qaboobaha iyo waliba waxyaabo badan oo faa'iido leh. Badanaa, geedo la iibsaday waxay noqon karaan kuwo daciif ah ama aan ku habboonayn noocyada kala duwan ee aad jeclaan lahayd inaad iibsato. Laakiin geedo yaanyo waa la kobcin karaa badanaaba. Maqaalkani wuxuu sharxayaa xeerarka aasaasiga ah ee beerista yaanyada by geedo sii kordhaya miraha.
Sida loo diyaariyo abuurka yaanyo ka hor inta aan la beeri
Tamaandho waxaa lagu beeray geedo dabiici ah oo furan oo sii kordhaya guriga dhexdiisa waxaa sameeya qof kasta. Tani dabcan waxay qaadan doontaa wakhti iyo dadaal, laakiin waxaad hubaal ka dhigan doontaa inaad dhammaadka u hesho. Dadka intooda badan geedo sii kordhaya waxay ururiyaan abuurka miraha bislaaday ee ay jecelyihiin, qallajiyaan, oo ku qoyn dhawr maalmood ka hor intaan la beeri. Taasi waa habka oo dhan.
Si kastaba ha ahaatee, haddii aad rabto in aad koraan geedo xoog leh oo u adkaysata cudurka iyo siinayaa goosashada hodanka ah, abuur ah ka hor beero waa in la diyaariyaa. Nidaamkan wuxuu marayaa dhowr marxaladood:
Seeds waxay u baahan yihiin in laga soo xulo cudurrada cakiran iyo cayayaanka ee miro bisil. Waa in la qalajiyaa dhawr maalmood oo qolka qafiifka ah leh (ka fogow qorraxda tooska ah). Si aad u doorato waxyaabaha ugu fiican ee beerto, miraha waa in lagu dhajiyaa dhowr daqiiqo ee saline. Diyaarintiisa, shaaha macmacaanka miisaska ayaa lagu kiciyaa galaas biyo ah oo lagu mudo 10 daqiiqo. Ka dibna miraha waxaa lagu qoyay biyo: kuwa soo degaya waxay u baahan yihiin in laga saaro, maadaama ay yihiin kuwo madhan ama la qalajiyay mana ku haboonaan doonaan geedo sii kordhaya.
Waa muhiim! Miro waaweyn oo culus waxaa ku jira nafaqooyin badan. Laga soo bilaabo this wax u koraan geedo xoog leh iyo geedo miro ah ee yaanyada.
Ka dib markii la baarayo, miraha waxaa lagu duubaa bacaha waxayna ku kaydsan yihiin meel mugdi ah heerkulka qolka. Haddii miraha lagu keydiyo qabowga, bil ka hor beerashada waxaa lagu talinayaa in ay kululeeyaan ilaa dhowr maalmood oo ah bateriga ku jira alaabta dharka.
Inta badan cudurrada yaanyada waxay xidid ku yeeshaan miraha waxayna jiri karaan muddo dheer, iyadoo aan loo eegin xaaladaha cimilada. Sidaa darteed ka hor intaan la beeriin, waxaa lagu talinayaa in sunta la saaro. Wixii tani, miraha waxaa lagu dhajiyay 15 daqiiqo. ee 1% xalalka kiriimiga ama 7 daqiiqo. ee xal 3% oo ah hydrogen peroxide, preheated ilaa 40 digrii.
Ma taqaanaa? Si kor loogu qaado dhalidda ee geedo, waxaa lagula talinayaa in la qoyo abuurka ka hor inta beero si maalin ah xal nafaqo. Tani waxay noqon kartaa xalka Immunocetofit ama juice ee baradho cusub.
Si aad u jilciso dareenka miraha iyo u fududee biqilka, wax beerto ka hor beerashada waa in lagu qooyay biyo heerkulka qolka 10 saacadood. Seeds ku faafi gabal faashad ah oo ku dhegay weel. Qaddarka biyaha waa in uu ahaado 30% ka yar mugga miro. Shan saacadood ka dib, biyaha ayaa u baahan doona inay bedelaan.
Si loo dedejiyo geeddi-socodka sprouts, waxaa lagula talinayaa in biqil laga dhigo abuurka shan maalmood oo ah saxaro qoyan leh faashad leh heerkul ah 20-22 digrii.
Waa muhiim! Inta lagu jiro biqilka, iska hubi in faashadda aysan engegin isla markaana isla wakhtigaas ma ahayn mid qoyan.
Si geedo si loo adkeeyo heerkulka heerkulka iyo qabow qabow, waxaa lagula talinayaa in ay adkaadaan abuurka. Intaa waxaa dheer, geedo sida bloom hore iyo soo saari doonaa wax soo saarka badan. Si loo dhammeeyo, miraha abuurka ayaa la dhigaa qaboojiyaha habeenkii (heerkulku waa inuu ka jiraa 0 ilaa 2 digrii), maalintana waxaa lagu kaydiyaa heerkul ah 20-22 digrii. Manipulations waxaa la sameeyaa dhowr jeer.
Xulashada iyo diyaarinta carrada
Yoobashada yaanyo ma aha mid aad u baahnayn dhulka. Ciidda loogu talagalay geedo yaanyo guriga ku jira ayaa labadaba la iibsan karaa loona diyaarshay si madaxbannaan. Marka aad iibsaneyso, mudnaanta waa in la siiyaa carrada peat.
Si aad u diyaariso ciidda naftaada, waxaad u baahan tahay inaad qaadato carrada loamy iyo ku dar tiro humus, compost. Geedo si fiican u koraan carrada dabacsan. Si arrintan loo sameeyo, waxaad ku dari kartaa peat ama sida balka sida loo kariyo.
Beeraha abuurka sidoo kale waxay isticmaalaan substrate kokeeye. Waxay ka kooban tahay nafaqooyin badan, waxay ka hortagtaa cayayaanka lafaha, waxay kor u qaadaan horumarinta nidaam xidid adag.
Ma taqaanaa? Kiniinnada Peat waxay ku haboon yihiin geedo xoog leh oo koraya, iyo 4-5 geedo lagu beeray iyaga. Marka laga beerto ciidan sida mustaqbalka ah, geedo quus ma ahan lagama maarmaan.
Awoodda geedo sii kordhaya
Doorashada awooda geedo sii kordhaysa waa mid muhiim ah. Seeds waxaa lagu beerayaa noocyada suxuunta:
dheriyada for geedo;
kiniin ama peat;
koobabka la tuuri karo.
Intaas waxaa sii dheer, ikhtiyaar kasta wuxuu leeyahay faa'iido iyo khasaaro. Sanduuqyada, taraamyada iyo cajaladaha ayaa aad u haboon iyo dhaqaale. Waxay u kori karaan tiro badan oo geedo ah, iyagoo daryeelaya dhammaan sprouts. Sidoo kale, kiiskani, awoodda noocan oo kale ah ayaa si fudud loogu wareejin karaa meel kale. Meelo badan ma qaataan kharashkuna waa ka yar yahay. Si kastaba ha ahaatee, weelasha gacmeedku waxay ku haboon yihiin geedo sii kordhaya oo kaliya ilaa daqiiqad. Sanduuqyada qotada dheer iyo baayacmushtarka, kalluunka qaangaarka ah ayaa lagu ridi karaa xididada, ka dibna way adkaan doontaa in la kala saaro iyada oo aan waxyeello lahayn. Haddii ay dhacdo dhaawac, geedo ayaa qaadan doona waqti dheer si ay u degaan, iyo laga yaabo in ay tahay abyss. Laga soo bilaabo doorashooyinkan waxaa ugu fiican in la doorto gawaarida leh qaybo ama cajalado.
Waa muhiim! Xulashada ugu fiican waxay noqon kartaa talefisho ama cajalado leh mesh dhererkiisu yahay 5-6 cm iyo dhererka dhinaca 10 cm Marka la iibsanayo, hubi inaad hubiso waxa weelka laga sameeyey. Waxaa fiican inaad iibsato saxaarad (cajalad) ee polystyrene. Ha ka iibsan weel ka soo chloride polyvinyl, waxa ku jira walxaha sunta ah ee ka kooban.
Dukumiinnada geedo iyo koobabka la tuuri karo - fursadda ugu fiican ee laga bilaabo qiimaha jaban. In iyaga, geedo waa la abuuri karaa ilaa transplantation galay dhulka u furan. Si kastaba ha noqotee, weelasha noocan oo kale ah waxay qaataan meelo badan oo aaney kuugu fiicneyn haddii geedo u baahan yahay in loo wareejiyo meel kale. Qeybta hoose ee taangiyada loogu talagalay beeritaanka abuur waa inay ahaadaan godadka dheecaanka.
Kiniiniga Peat - ku fiican. Waxay gacan ka geystaan ​​horumarinta nidaam xidid adag oo sprouts ah, ka hortagga kallana siinta. Si kastaba ha noqotee, raaxadan ma aha mid raqiis ah.
Beeraya geedo yaanyo ah geedo
Beeridda geedo yaryar ee geedo waa in la fuliyaa Maarso 15-20. Caleemaha ugu horreeya waxay soo muuqan doonaan hal usbuuc. Laba bilood oo kale ayaa ka horeysa ubaxyada yaanyada hore ee yaanyada, iyo todobaad kale ayaa loo baahan yahay si loo soo celiyo dhirta ka dib qoyaan. Horraantii Juun, geedo ayaa diyaar u noqon doona beeritaanka dhul furan. Ka hor inta beerto ciidda waa in ay ahaato mid qoyan. Seeds waxaa lagu qodaa ciidda aan ka badneyn 1 cm iyo fogaan 5 cm midba midka kale. Markaa waxaad u baahan tahay inaad ku daboosho weelka oo leh filim ama dhalo. Ka dib markii la beero markabka waa in lagu meeleeyaa meel kulul leh heerkul ah 25 digrii. Xaaladahan oo kale, geedo ayaa soo bixi doona isbuuc gudihiis.
Daryeel iyo kobcin geedo yaanyo
Ka dib markii geedo u muuqdaan, geedo u baahan tahay in loo wareejiyo qolka iftiin iyo qabow. Heerkulka heerkulku waa inuu ka jiraa +14 ilaa +16 digrii. Qolku waa iftiin. Haddii aanad jirin, waad sameyn kartaa iftiinka sprouts adoo adeegsanaya nalalka.
Toddobaad kaddib, heerkulku waa in yar la kordhiyaa +20 digrii, iyo habeenkii si ay u hoos u dhigto dhowr darajo. Si arrintan loo sameeyo, waxaad furi kartaa daaqada, laakiin ha u oggolaanin qorshaha.
Ma taqaanaa? In dhowr maalmood ee ugu horreeya ka dib markii biqilka, waxaa lagu talinayaa in ay diyaariyaan for geedo agagaarka saacadaha iftiiminta. Tani waxay si aad ah u dedejinaysaa biqilka.
Waraabiyo geedo yaanyo ah oo ku koraya guriga waa in ay dhexdhexaad ahaadaan oo la qaadaa biyaha heerkulka qolka. Ilaa xaashida ugu horeysa ee muuqata, si fudud u buufinaysaa ciidda biyaha marka ay noqoto mid qalalan. Ka dib markii muuqaalka caleen, waraabinta waxaa la fuliyaa toddobaadkii hal mar, iyo ka dib markii formation shan caleemo wanaagsan, geedo waxaa lagu waraabiyaa 3-4 maalmood kasta.
Geedo yaryar yaryar
Dhufacu waa geedo geedo lagu shubo weelal qaas ah. Tani waxay keenaysaa sameynta nidaamka xididka. Waxaa jira koritaanka xididada lateral, nafaqada warshadaha oo wanaajiyay. Geedka canjeerku wuxuu noqdaa mid xoog badan oo si sahal ah u qaadan doona xididka beerta furan, wuxuu siin doonaa goosashada wanaagsan. Sameynta geedo yaanyo ah ayaa la qaadaa maalinta tobnaad ka dib marka caleemaha kowaad soo baxaan. Si kastaba ha noqotee, kiis kasta waa lagama maarmaan in si gaar ah loo wajaho. Xeerka guud waa in geedo ay ku dhuftaan maalinta labaad kadib marka ay muuqato waraaqda ugu horeysa ee dhabta ah.
Waa muhiim! Marka la quuso, caleemaha ugu fiican oo caafimaad leh ayaa la doortaa, inta kalena waa in la tuuraa. Sidoo kale on xididka ee dhalidda kasta waa inuu noqdo kubad dhoobo ah yar.
Dhowr maalmood ka hor soo qaado, geedo u baahan yahay in la waraabiyo wax yar si ay caleemaha si fudud loo saari karaa. Waxaad u baahan tahay in aad geedo ka soo saarto dhulka si aad ah u taxaddar si aaney u waxyeeleynin xididada daciifka ah. Waxaa lagugula talinayaa inaad wiiqdo ulo ama cadayga. U beddel baahida awoodda qoto dheer. Si aad taas u sameyso, waxaad isticmaali kartaa dheriyo, koobab nus litir ah oo la tuuri karo ama dhalooyin caag ah oo qoorta la gooyey.
Ka dib markii la soo qaado, sprouts ayaa si ballaaran loo waraabiyo loona wareejiyo meel qabow leh hawo qoyan. On geedo waa in aan dhici raajooyin toos ah ee qorraxda. Toddobaad ka dib, geedo waxaa lagu celiyaa meeshoodii hore ee diiran.
Geedo yaanyo adag
Hardening of geedo waxaa lagu talinayaa si marka marka beeray dhulka u furan ma qaboojiso, waxay u adkaysatay isbedelka heerkulka oo inta badan dhaca xagaaga. Aan u fiirsano si faahfaahsan sida loo khafiifiyo geedo yaanyo. Marka ay dibedda u baxdo oo heerkulku gaadhsiisan yahay 15 digrii, weelasha geedo leh geedo ayaa la geeyaa wadada ama balakoonka. Tan ka hor, dhirta ayaa la waraabiyaa. Inta lagu jiro adkeynta, waxaad u baahan tahay inaad ilaaliso heerkulka. Marka heerkulku hoos udhaco 8 ° C, weelasha waa in loo keenaa qol diiran. Waxaa fiican inaad soo saaro geedo ka dib afar ama shan saac oo fiidkii, marka qorraxdu ay yar tahay. Haddii kale, waxaa laga yaabaa in la shiilo. Sidoo kale waxaad u baahan tahay inaad kormeerto carrada, waa inaysan qalajin. Haddii ciidda ay qalalan tahay, waxay u baahan tahay in la yareeyo wax yar. Ha ku dhaafin weelasha qorraxda tooska ah. Muddada adkaanta waa laba toddobaad.
Ka hortagga iyo ilaalinta geedo yaanyo ah oo ka soo jeeda cayayaanka iyo cudurrada
Koraaya geedo yaanyo badanaa waxaa lagu xoqay cudurada fangas iyo cayayaanka. Si aan dhibaato looga qabin dhibaatooyinkaa, waxaa lagu talinayaa in geedo yaanyo lagu daaweeyo fungicides, sunta cayayaanka, ama daaweynta dadka.
Cudurada ugu caamsan ee yaanyada waa:
gariir goor dambe ah;
kallana midab leh;
Ku dhowaad dhammaan cudurradani waxay leeyihiin dabeecad fungal ah. Si aad iyaga ula macaamilato way adag tahay. Sidaa daraadeed, waxaa wanaagsan in la fuliyo tallaabooyin ka hortag ah. Kuwaas waxaa ka mid ah kuwan soo socda:
mararka qaarkood si dabacsan dhulka;
Iska ilaali beerto badan;
ha daadin geedaha;
jeexo caleemaha hoose ee madow;
ka hor inta beerto dhul furan, geedi socodka geedo leh 0.5% dareeraha Bordeaux;
geedi socodka dhirta iyo ciidda leh ash kiln (cantoobada ash ee waa in lagu kala firdhiyaa jihada dabaysha);
in quudinta ugu horeysa ee geedo waxaa lagula talinayaa in lagu daro yar sulfate copper (2 g 10 litir oo biyo kulul).
Ma taqaanaa? Si loo yareeyo khatarta fungal iyo cudurada viral, laguma talinayo in la beero tamaandhada u dhow bataatooyinka, basbaaska, ukunta, ama meelo dalagyada noocan oo kale ah koray sannadkii hore.
Cayayaanka ugu caansan waxaa ka mid ah:
Si looga hortago dhaawaca dhirta by cayayaanka, waxaa lagama maarmaan ah in laga fogaado codsiga xad-dhaaf ah ee Bacriminta nitrogen. Waxaa sidoo kale faa'iido leh in lagu daweeyo ciidda iyo dhirta dambaska, ka saar caleemaha yellowed hoose. Calaamadaha ugu horreeya ee dhaawaca seedling by cayayaanka, waa in laguula dhaqmo cayayaanka.
Hadda waxaad taqaanaa sidii ay u koraan geedo yaanyo laga bilaabo abuurka, siraha ugu weyn ee aad ka ilaalin kartaa dhirta xaaladaha cimilada xun, cudurrada iyo cayayaanka. U hoggaansanaanta sharciyada la sharaxay waxay kaloo dammaanad qaadeysaa wax-soosaarka sare ee yaanyada.
Yurlovskaya taranka qoyan ee digaagga
Baro sida loo koro eggplants bannaanka bannaan ee xaafadaha? Talooyin ku saabsan beerashada abuurka, talooyin ku saabsan daryeelidda geedo
Rose: sharaxaad iyo taariikhda boqoradda ubaxa
Roses waxaa jecel dad badan, iyo sabab wanaagsan. Ka dib oo dhan, kuwani waa ubaxyo aad u qurux badan, ku dhufan leh kala duwan oo midabyo, qaabab, naqshad. Waxay yihiin kuwo cajiib ah oo qurux badan, dheer oo qurux badan xitaa marka ay ku maareynayaan. Laakiin dhufanayadu ma aha oo kaliya quruxda iyo dabaaldega. Waxay ku sumoobeen maaddooyin wax ku ool ah, taas oo ay ugu isticmaalaan kiknoolojiyada iyo karinta, iyo saliidaha lagama maarmaanka ah, oo qiimaha lagu qiimeeyo aromatherapy iyo perfumery. Read More
Talooyin waxtar leh: goorma iyo sidee loo soo ururiyaa kareemka liin si loogu qalajiyo jiilaalka?
Isticmaalka stock-rose (mallow) ee daawada dabiiciga ah: guryaha faa'iido iyo contraindications